June 15, 2020 - Khitalin Media
ညဘက်တွေ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်သူတွေအတွက် တကယ်စွမ်းတဲ့ဆေးနည်းလေးပါ …
June 15, 2020 Khitalin Media 0
ညဖက် ညဖက် အိပ်မပျော်လျှင် ၁ ။ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ ။ အိပ်စက်ခြင်း အတွက် အထူးကောင်းမွန်ပြီး အားရှိသည် ။ ၂ ။ ကြက်သွန်ဖြူ ခေါင်းအုံးအောက် ၃ တက် ( ကျွန်တော် ကတော့ ၁ ဥ ) […]
ဂိမ်းရှုံးတာ အမေ့ကြောင့်ဆိုပြီး သားဖြစ်သူက ဓါးနဲ့ ၁၀ ချက်မက ရက်ရက်စက်စက် ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား . . .
ဂိမ်းရှုံးတာ အမေ့ကြောင့်ဆိုပြီး သားဖြစ်သူက ဓါးနဲ့ ၁၀ ချက်မက ရက်ရက်စက်စက် ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား Game အလွန်အကျွံမဆော့ဘို့တားမြစ်တဲ့ မွေးသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကို သားဖြစ်သူက ဓါးနဲ့ ၁၀ ချက်မကထိုးနေစဉ် ဒဏ်ရာတွေကြားကနေ သားကိုထွက်ပြေးဘို့ပြောတဲ့ကြီးမားလှတဲ့မိဘမေတ္တာ ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကသတင်းတွေဟာမျိုးစုံကြားနေရလွန်းလို့ တစ်ချို့သတင်းတွေကို စိတ်ပျက်ပြီးမရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ် ၊ ယခုလည်း ဂိမ်းကြောင့် လူငယ်တွေ […]
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း…(15-6-2020 to 21-6-2020)
တနင်္ဂနွေသားသမီး ငွေကြေးကံကောင်းမည့်ကာလပါ ငွေကြေးစုဆောင်းမိပါလိမ့်မည် ကောင်းသောကံကြမ္မာကောင်းများနှင့်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မည်… ရပ်ဝေးမှသတင်းကောင်းကြားရတတ်သလို လခစားဝန်ထမ်းများလစာတိုးခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရခြင်း နေရာကောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းများကြုံရပါမည်… ထီ49ပါသောထီထိုးပါ ယတြာသကြားလုံး၉လုံးဘုရားလှုပေးပါ… တနင်္လာသားသမီး ရင်းရင်းနှီးနှီးလူရင်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှမိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်အကောက်ကြံချောက်တွန်းတတ်ပါသည် ချစ်သူမရှိသေးသူများချစ်သူရရှိပါမည် ခေါင်းကိုက်ခြင်းခေါင်းမူးခြင်းဝေဒနာများခံစားရတတ်ပါသည်… လောင်းကစားလုံးဝအကျိူးမပေးပါ ရှုံးမဲမဲလေးဆုံးရှုံးမူများလေဖြစ်ပါသည် ဝင်ငွေထက်ထွက် ငွေပိုများနေပါလိမ့်မည်… ထီ၉၀ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ စနေထောင့်တွင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ… အင်္ဂါသားသမီး ရပ်ဝေးခရီးကိစ္စ နိူင်ငံရပ်ခြားကိစ္စများစီစဉ်ထားပါကအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ယခုကာလမှာလှုပ်ရှားသွားလာမူတွေပိုများနေပါလိမ့်မည်… ကျန်းမာရေးမှာခေါင်းမူးခေါင်းနောက်ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါသည် […]
ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ပါကြရဲ့လား(ပါတဲ့သူတွေဟာ ကံအထူးဆုံးလူသားတွေပါ)
(လက်ခဏာပညာနှင့်ဘဝကံဆက်စပ်နေပုံ)ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ[သို့]နာနာဝိဇ္ဇာသယကြက်ခြေ (ဂမ္ဘီရကြက်ချေ ပါသူများအတွက်) ဒီမနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက်မှာနိုးလာပါတယ်။ခါတိုင်းဆို ဘုရားကန်တော့သစ္စာပြုပြီး စာဖတ်၊ပြီးရင် တရားထိုင်ပြီးကရေးခြင်တဲ့စာရေးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြန်လှဲပါတယ်။ ဒီမနက်ကတော့ စာမဖတ်အားဘဲ ရေးခြင်ဖော်ပြခြင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်လေး တစ္ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ငါးပါးသီလ လုံစွာနေထိုင်နေပေမဲ့ လောကဓံဒါဏ်ကိုခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ မနေ့ကတော့ ဘုရားစာတွေရွတ်ပေမဲ့ ဘဝမတိုးတက်သူတွေအနှောင့်အရှက်ခံနေရသူတွေကို ပရိကံလိုအပ်ချက်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ ငါးပါးသီလ […]
(၁၀)တန်းဖြေထားတဲ့ အပျိုဖော်ဝင်ခါစ (၁၆)နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေ တစ်ယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ သမီးမရှိပဲ အခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်​​စောင်​ တင်ထားတာကို တွေ့ လိုက်ရပါတယ် …။စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါ…. ချစ်သော ဖေဖေ…..စာကို ရေးရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဖေဖေနဲ့ မေမေကို တကယ် ချစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သမီးရဲ့ […]
အိမ်ထောင်ရေးတွင် ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အချက်များ
အိမ်ထောင်ရေးတွင် ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ၁။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားပါ။အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် တဘက်သားကိုအပြစ်တင် ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်း နိုင်တဲ့ အပြင်မီးလျှံထဲကို […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ လူတချို့ဖတ်ဖို့
ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက […]
တရုတ်နှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တကျော့ပြန်ကူးစပ်နေပြီတဲ့ဗျာ …
တရုတ်နှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု တကျော့ပြန် မြင့်တက်လာ ကမ္ဘာတလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာမှာ တနင်္ဂနွေနေ့က တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရောဂါကူးစက်သူ အသစ် ၅၇ ယောက် ရှိတဲ့အတွက် ၂ လတာအတွင်း ကူးစက်မှုအများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ခရီးသွားလာခွင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတာတွေကို […]
သခေငျြ​​လောကျ​​အောငျ​ ကံဆိုး​နပေါ​စေ ဘယျ​​ဗဒေငျ​ ယတွာမှမလို ဒီဂါထာထုံ​အောငျ​သာ ရှတျ​​နပေါ . . .
သေချင်​​လောက်​​အောင်​ ကံဆိုး​နေပါ​စေ ဘယ်​​ဗေဒင်​ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံ​အောင်​သာရွတ်​​နေပါ သေချင်​​လောက်​​အောင်​ ကံဆိုး​နေပါ​စေဘဝ​မျော်​လင့်​ချက်​ ​ပျောက်​​နေပါ​စေ အ​ကြွေး​တွေပိ စိတ်​​မျော်​ဝင်​​ငွေမရှိမိသားစု​ရေး အိမ်​တွင်း​ရေး အလုံးစုံညံ​နေပါ​စေစိတ်​ဓာတ်​ကျပြီး အထီးကျန်​ စိတ်​အရူးတပိုင်းဖြစ်​​နေအုန်းဒီ​တောင်​ကို ​ကျော်​နိင်​ပါ့မလား​တွေးပူ​နေသူများဘယ်​​ဗေဒင်​ ယတြာ မှ မလိုအပ်​ပါ ထုံ​အောင်​သာ ရွတ်​​နေပါ ဇလွန်​ပြည်​​တော်​ပြန်​ဂါ​ထာ ​တော်​ကြီးထူးကို ထူး​စေပါသည်​ တကယ်​လုပ်​ရင်​ တကယ်​ဖြစ် Credit […]